Buy တင်းတိတ် ဝက်ခြံ အမဲစက် ပျောက်ဆပ်ပြာ (5,500Ks) in ရန်ကုန် on ipivi.com
တင်းတိတ် ဝက်ခြံ အမဲစက် ပျောက်ဆပ်ပြာ
အပြစ်ကင်းစင်တဲ့ လှတမျက်နာတွက် Zora snail soap လေးရှိတယ်ဆိုတာ သိစေချင်တယ်
ကြေငြာသလောက် ကောင်းတာမှ ဟုတ်ရဲ့လားလို့မထင်လိုက်နဲ့နော် ကြေငြာတာ ထက်ကို ပိုကောင်းတာ လက်တွေ့ သုံးဖူးသူတိုင်သိနေပါပြီး
ဝက်ခြံ တွေ အထွက်များလို့ လဲ စိတ်ညစ်
စိတ်ပူနေတာ တွေ မရှိနဲ့တော့နော
် ဒိမှာ သုံးဖူးသူတိုင်းကြိုက်တဲ့ Snail soap
အလှတွေစုဖို့ snail saopလေး သုံးကြည့်ပါ
ကိုယ်သုံးနေတာ တကယ်ကောင်းလွန်းလို့ ဒီဆပ်ပြာလေး အရမ်းကြိုက်တယ်
တင်းတိတ် နေလောင် အမဲစက် များအတွက်လဲ အကောင်းဆုံး မျက်နာသစ် ဆပ်ပြာ နော်
အသားရေ မညီညာတွေအတွက် တခါပဲ သုံးကြည့်နော် လုံးဝအကြိုက်တွေ့မှာ အာမခံတယ်
ZORA Premium snail soap
For face ‍
ဒီဆပ်ပြာလေးကတော့ မျက်နှာအတွက် premium အကောင်းဆုံး အရည်အသွေး အမြင့်ဆုံး သီးသန့်ထုတ်ထားတဲ့ဆပ်ပြာလေးပါနော်
သူ့ရဲ့ အာနိသင်လေးနှင့် ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေ အရင်ပြောရရင်တော့
1. snail extra Gold ရွှေမှုန်ပါဝင်လို့ မျက်နှာဖြူကြည်လင်စေပါတယ် တစ်ခါမျက်နှာသစ်ပြီးတိုင်း ရွှေသွင်းလိုက်တဲ့ effect ကိုရရှိစေပါတယ်
2. Marine Collagen ကြောင့် မျက်နှာသစ်ပြီးတာနှင့် မျက်နှာ တင်းရင်းပြီး အရေးကြောင်းများလျှော့ပါသွားစေပါတယ်
3. Ginseng Expect ပါဝင်သောကြောင့် မျက်နှာမှာရှိတဲ့ ဝက်ခြံ , စားဝက်ခြံ , အမဲစက် တင်းတ်ိတ်တွေကို လျှော့ပါးပျောက်ကင်းနိုင်တဲ့ အစွမ်းရှိပါတယ်
4. Wild Honey ပါဝင်လို့ မျက်နှာအသားအရေကို နုဖတ် အိညက်စေခြင်း ချွေးပေါက်နှင့် အသားအရေ မညီ မညာ ဖြစ်နေသော သူတွေအတွက်ပါ အဓိက သိသာကောင်းမွန်ပြီး အိစို နုဖတ်တဲ့ baby တွေလို အသားအရေကို ရရှိစေပါတယ်
5. Coconut 🥥 Oil , Olive oil , Allantoin ,propylene Glycol ပါဝင်လို့ မျက်နှာအတွက် လိုအပ်တဲ့ အစိုဓာတ်ထိန်းသိမ်း ခြင်းနှင့် ခြောက်သွေ့ကြမ်းတမ်းကို ဟန့်တားပေးစေပါတယ် တင်းတိတ်နှင့်မှဲ့ခြောက်ကို ပုံမှန်သုံစွဲပါက ပျောက်ကင်းသည်အထိ အစွမ်းထက်ပါတယ်
6 . Vitamin E , Vitamin B3 ပါဝင်လို့ မျက်နှာအတွက်အဓိကလိုအပ်နေတဲ့ အဟာရကို ဖြည့်တင်းပေးပြီး အသားအရေ စိုပြေ နုညံ့ခြင်း အိစက်ခြင်း ဖြူခြင်းအကြိုးကို ခံစားရမှာပါရှင့်
အားလုံးခြုံပြီးပြောရရင်တော့ #တင်းတိတ် #အမဲစက် ' #ဝက်ခြံပျောက် , #မျက်နှာဖြူစေတဲ့ ဆပ်ပြာလေးပါ
သာမန်မျက်နှာသစ်ဆပ်ပြာတွေထက် ထူးခြားကောင်းမွန်တဲ့ အစွမ်းတွေပါဝင်တဲ့အတွက်
မြန်မာ /ထိုင်းနိုင်ငံမှ FDA ထောက်ခံချက်များ
ရရှိပြီးဖြစ်တဲ့အတွက် စိတ်ချလက်ချ သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်နော်
တစ်တုံး 5500 3တုံးယူ ပို့ခ free
မှတ်ချက် / ကျား/ မ အသားဖြူချင်သူတိုင်း သုံးစွဲနိုင်ပါတယ်
အမည်: တင်းတိတ် ဝက်ခြံ အမဲစက် ပျောက်ဆပ်ပြာ